Soomaaliya oo lagu Diley Askeri u dhashey Dalka Mareykanka/goorma iyo goobtee?.
Madaxweyne Caalin oo godkiisa ay biyo ugu soo galeen.
Qarax nafti hurnimo oo lagu qaadey maqaayad ku taal agagaarka guriga hooyooyinka iyo xarunta xmjs.
Xisbiga midnimada jamhuuriga soomaaliyeed oo soo dhaweeyey ra’iisalwasaaraha cusub ee soomaaliya dr cabdi faarax shirdoon.
Baarlamaanka Calooshood U Shaqeestayaasha TFG-da Ayaa Maanta Ansixiyay R/Waasaaraha Cusub ee Soomaali American-ka C/Wali Maxamed Cali Gaas
Wararka Soomaaliya Ka dib kulan ay maanta ku yeesheen xarunta Golaha Shacabka Barlamaanka Calooshood ushaqeestayaasha TFG-da uuna shir Guddoominayay Qaa'n Shariif Xasan Shiikh Aadan ayaa waxaa lagu ansixiyay R/Wazaaraha Cusub ee Soomaali American-ka C/Wali Maxamed Cali Gaas. Waxaana kulankaasi ka qeyb galay Madaxweyne Shariifka Soomaaliya Iyo Taliye ku Xigeenka Ciidamada Shisheeye...
Taliska AMISOM oo sheegay inuu baarayo kufsi lagu eedeynayo qaar ka mid ah askartooda.
Saraakiisha ciidamada AMISOM ayaa sheegay iney baarayaan falal kufsi ah oo mudooyinkii ugu dambeeyey lagu eedeeynayey iney ku kaceen qaar ka mid ah ciidamadooda ka howlgala Somalia. Maalmo ka hor ayaa haweeney Soomaali ah waxay sheegtay in ciidamo Soomaali ah ay xoog ku kaxeeyeen, ka dibna u geeyeen ciidamada AMISOM...
Golaha Ammaanka QM oo dukumenti kasoo saarey Soomaaliya Eretria/maxaa ku qoran?.
Dukumiinti bishii aanu soo dhaafnay kasoo baxay xarunta QM gaar ahaan golaha ammaanka ayaa aad loogu falanqeeyay arimaha Soomaaliya iyo Eretria gaar ahaana Soomaaliya. Kooxda la socota gaar ahaan arimaha Soomaaliya iyo Eriteria ayaa iyana warqad arintaa kasoo saartay ayadoo ladoonayo in dareenka xubnaha golaha ammaanka lagu soo jeediyo...
C/kariin Dhaga Juun Oo Cawa U Sheegay Musharaxiinta Xilka Kula Tartantey In Gal-mudug Laga Hirgalinayo Siyaasada Guracan Ee Damu-Jadiid.
Sidii lawada filayay madaxweynaha maamulka Galmudug waxaa loo magacaabay Cabdi Kariim Xuseen Guuleed oo katirsan xisbiga Damul Jadiid ee uu Xasan Gurguurte madaxda ka yahay. Doorashada madaxtinimada waxaa ku loolamay Axmed Macalim Fiqi iyo Guuleed Dhaga Juun balse lacago farabadan oo xildhibaanada lasiiyay ayaa sababtay in Cabdi Kariim Guuleed uu...
Dalka K/afrika oo dhawaan la filayo in uu ka baxo xubinnimada Maxkamada ICC.
Warbaahinta ayaa ku waramaysa in Koonfur Afrika ay si Rasmi ah u billowday Hannaankii ay kaga bixi lahayd ka mid ahaanshaha Maxkamadda Dembiyada Caalamiga ah (ICC). Wararku waxay intaa ku darayaan in Diblamaasiyiinta dalkaasi ku wargeliyeen Qarmada Midoobay tallaabadan ay qaadayaan waxaanay ku eedeeyeen ICC inay ka xagliso dalalka Afrika. Sannadkii...
Maxaad Kala Socotaa War-Murtiyeedka laga soo saaray shirka Istanbul lagu soo gabagabeeyay.
WAKAALADDA WARARKA WARSOM.COM Shirka caalamiga ah ee ku saabsanaa mustaqbalka wadanka Soomaaliya oo ka socday magaalada Standul ee wadanka Turkiga ayaa caawa la soo gabagabeeyay, waxaana shirkaas khudbado kala duwan ka jeediyay madaxda wadamada caalamka ee ka qeyb galay shirkaas oo uu ka mid ahaa Madaxweyne Shariif Sh. Axmed. Gabagabada shirka...
Wadooyinka Muqdisho oo maalintii Sedexaad xiran
Waxaa weli xiran qaar kamid ah wadooyinka magaalada Muqdisho iyadoona la arkaayo Boqolaal dad oo u badan Arday oo lugeynaayo Xaafadaha kadib markii gaadiidka BL-da laga mamnuucay inay adeegsadaan laamiyada iyo wadooyinka caadiga ah. Wadooyinka qaar ayaa waxaa lagu jaray gaadiidka dagaalka gaar ahaan nooca loo yaqaan Cabdi-bilaha,...
Suuq weyn oo Gebi ahaanba Dab uu baabi’yey Xeryaha DHadhaab ee Qaxootiga.
Wararka ka imanaya xeryaha Dhadhaab ayaa sheegay in xalay dab xoogan uu ka kacay suuqii ugu weyn ee xeryaha Dhadhaab ee ay ku jiraan qaxootiga Soomaaliyeed ee dalka Kenya, dabkaasi oo baabi’iyay dhamaan goobihii ganacsiga Suuqa Dhadhaab ee xeryaha qaxootiga. Dabkaan ayaa ka dhashay sida dadka ay sheegeen Koronto, waxaana...
Dalka Uganda oo dagaal ay ku dhinteen 55 ruux ka dhex qarxey.
Ugu yaraan 55-ruux, ayaa lagu dilay iska-horimaad dhexmaray ciidamada booliiska Uganda iyo koox doonaysay inay sameysato Jamhuuriyad u gaar ah, sida uu sheegay afhayeenka Booliiska dalka Uganda. Inta badan Qalalaashan, ayaa ka dhacday xafiisyada boqor deegaan oo ku sugan magaalada Kasese ee Galbeedlka Dalka Uganda, halkaasoo la geeyay ciidammo badan...
1234...1,407Page 3 of 1,407